Dhiirigelinta Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOT
Home/About Tekna Hyperbaric/Dhiirigelinta Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOT
Dhiirigelinta Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOTteknamfg2018-01-04T18:19:33+00:00
Kulliyadda Maraykanka ee Daawada Hyperbaric
ACHM waa bulsho xirfad leh oo loogu talagalay isticmaalka haboon, heerarka daryeelka, waxbarashada, tababarka, shahaadada, iyo aqoonsiga Daaweynta oksijiin ah ee hyperbaric sida takhasus gaar ah oo caafimaad.
College College of Hyperbaric Daawada waxaa lagu aasaasay 1983 si ay u taageeraan dhakhaatiirta ku shaqeeya daawada hyperbaric oo aqoonsaday muhiimada daweynta dabiiciga ah ee codsiyada daaweynta, gaar ahaan maaraynta nabarka.
Iskuduwaha Shabakadda Digniinta
DAN Medical Information shaqaalaha waaxaha 24-saac khadka degdega ah waxayna ku takhasusaan isuduwidda bixinta, macluumaadka daaweynta qaliinka iyo gudbinta daaweynta.
Sahaminta iyo cilmi-baarista ayaa ah nooca sharaxaadda sayniska. Rubicon Foundation waxay bilaabaysaa mashaariicda gacan ka geysta balaarinta fahamka aadanaha.
Daaweynta Hyperbaric Daaweynta Caribbean
Caribbean Hyperbaric Daawada waxay ka kooban tahay oo ay maamushaa koorsooyin heer qaran oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay (oo la aqoonsan yahay Guddiga Qaranka ee Diving iyo Hyperbaric Medical Technologies iyo College College of Hyperbaric Medicine). Koorsooyinkan waxaa loo adeegsadaa caalam ahaan iyada oo dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaadku ay isticmaalaan si ay ugu qalmaan aqoonsiyada hyperbaric ee looga baahan yahay inay bixiyaan daaweyn qalafsan ee bukaanka.
Caribbean Hyperbaric Daawada sidoo kale waxay bixisaa koorsooyin 12 ah oo ay ansixisay Shabakada Digniinta Diver-ga (DAN)
Bulshada Daaweynta Daawada Xanuunka Xoolaha
Hadafka bulshada ee Veterinary Medicine Society waa in lagu hormariyo sayniska iyo isticmaalka daaweynta qalabka hyperbaric ee xayawaanka iyo daawada aadanaha iyada oo loo marayo horumarinta waxbarashada, helitaanka, iyo iskaashiga.